एनआरएनए पोर्चुगलका अध्यक्ष गैह्रेको कार्यसमिति बैठकमै ठाडो आदेश : "संघका गलत गतिबिधी लेखिएका समाचार, सामाजिक संजालमा लेखिएका स्टाटस, व्यक्तिगत विचार कसैले पनि लाईक, शेयर र कमेन्ट नगर्नु वा राजिनामा दिनु " - VOICE OF NEPAL
२७ पुष २०७६, आईतवार ००:५२
863 ??? ???????
गैह्र आवासिय नेपाली संघ पोर्चुगलको कार्यसमितिको बैठकमा संघका अध्यक्ष तिलक गैह्रेले कार्यसमिति सदस्यहरुलाई ठाडो चेतावनी दिएका छन्। बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष गैह्रेले भने ” “संघका गलत गतिबिधी लेखिएका सामाजिक संजालका स्ट्याटस र समाचारहरु लाइक, शेयर र कमेन्ट नगर्नु वा राजिनामा दिनु ” ।
तानाशाही शैलीमा आफ्ना कार्यसमिति सदस्यहरुलाई हुकुम दिने अध्यक्ष गैह्रेको अधिकार संघमा जत्ति छ , त्यत्ति नै अधिकार यो संस्थामा आबद्द भएका हरेक साधारण सदस्यमा छ। संघ कुनै एक व्यक्तिको पेवा होइन, यसका हरेक गतिबिधिको जानकारी प्रत्येक साधारण सदस्यले पाउनुपर्छ। व्यक्तिगत गोपिनियता बाहेकका संघका बर्तमान र भावी कार्यक्रमहरुको जानकारी सबैमा हुनुपर्छ र संघले निरन्तर दिनुपर्छ। संघको हरेक बैठकमा के के निर्णय भए, भविष्यका कार्यक्रमहरुलाई बाधा नपुग्ने र गोपनीय राख्नुपर्ने बाहेकका हरेक निर्णयहरु बैठक पश्चात् सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
संघका हरेक गतिबिधिहरुको जानकारी पाउनु र संघले गरेका गलत निर्णय र कामहरुमा खबरदारी गर्नु हरेक सदस्यको नैसर्गिक र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार हो। नैसर्गिक र स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि धावा बोल्दै संघका अध्यक्षले बैठकमै चेतावनी दिनु लोकतन्त्रको उपहास हो। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्रशंसा र वाहिवाही मात्रै चाहनु लाज्जास्पद र कायरपन हो, प्रशंशाका भोगीहरुले आलोचना सहने शक्ति र सामर्थ्य पनि राख्नुपर्दछ।
केही समय अगाडी राससका पोर्चुगलस्थित सम्बाददाताले लेखेको समाचार ” पोर्चुगलको सडकमा सुत्छन् नेपाली ” शिर्षकको समाचार प्रकाशित भएपछि अध्यक्ष गैह्रेले कार्यसमितिको बैठक नबोलाई र सल्लाह नै नगरी उक्त समाचारलाई कथाको संज्ञा दिदै कपोलकल्पित र गलत भएको र सडकमा कोही नेपाली पनि बस्दैनन् भन्दै एकलौटी बिज्ञप्ति निकालेका थिए। ” पोर्चुगलको सडकमा सुत्छन् नेपाली ” भन्दा किन यत्ति धेरै डराए र आत्तिए गैह्रे ? किन कार्यसमितिको बैठक र सल्लाह बिना नै बिज्ञप्ति निकाले ? कहिँ ” पोर्चुगलको सडकमै सुत्छन् नेपाली ” भन्दा गैह्रेको ब्यापार व्यवसाय चौपट नै हुने त होइन ? अनुसन्धानको बिषय बनेको छ। अर्कोतिर देशकै राष्ट्रिय समाचार समितिले सम्प्रेषण गरेको समाचारलाई नै कपोलकल्पित र गलत भन्ने गैह्रेको हैसियत के ? के गैह्रे रासस का समाचार विभागका निर्देशक हुन् देशकै सरकारी निकायले निकालेको समाचार गलत भन्ने ?
स्मरण होस् , दुई दिन अगाडी मात्रै करिब दुई बर्षदेखि पोर्तुगलको सडकमा माग्दै र बस्दै आएका एक नेपालीको उद्धार गरी नेपाल पठाईएको छ।
संघले समुदायका हितकारी निर्णय गरेमा वा त्यसका कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुले खराब काम नगरेमा कसले गर्छ आलोचना ? संघमा गलत निर्णय र गतिबिधिहरु गर्दै जाने, आफ्नो आचरण नसुधार्ने र उल्टै हुकुमी शैलीमा आदेश दिने संघका अध्यक्ष र कार्यसमितिले आम नेपालीहरुको हितमा निर्णय र काम गर्न जरुरी छ। संघभित्र नेपालका राजनैतिक दलका भात्रीसंगठनका क्याड्रेहरुको भर्तीकेन्द्र बनाउने र आफूखुशी काम र निर्णय गरे संघमा अनेकौ दुर्घटना हुने निश्चित छ। व्यक्ति बलिको बन्न खोजे संस्था धारासायी हुन्छ। संघलाई बचाउन र यसलाई आम नेपालीको हितकार बनाउन सबैको उत्तिकै चासो हुन जरुरी छ र संघ र त्यसका अध्यक्षले आलोचनाहरुलाई अवसरका रुपमा लिएर संघलाई अझै बलियो र सबै नेपालीहरुको अपनत्वको भावना विकास गर्न जरुरी छ।